समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं, साउन १७ । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबीच एकीकरण भई नयाँ बनेको समाजवादी पार्टी नेपाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । निर्वाचन आयोगको आज भएको बैठकले उक्त दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता शङ्करप्रसाद खरेलले जानकारी दिए ।
याे पनि पढ्नुस समाजवादी पार्टीः सरकार नछाड्ने, संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने !
समाजवादी पार्टीले गत जेठ ३० गते आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको थियो । गत वैशाख २३ गते समाजवादी पार्टी नेपाल बनेको थियो । समाजवादी पार्टीका २५ जना पदाधिकारीसहित ४३० जना केन्द्रीय सदस्य छन् । समाजवादी पार्टीसँगै अव निर्वाचन अयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलको सङ्ख्या १३१ पुगेको छ ।
याे पनि पढ्नुस कसले ब्युँतायो नेकपा (एमाले) ?
ट्याग्स: दर्ता, निर्वाचन आयोग, समाजवादी पार्टी